Wararka - Kuwa sameeya Kaabayaasha Cuntada ayaa si gaar ah loogu arkaa inay asal ahaan hoos imaanayaan hagista federaalka cusub
Kuwa sameeya Kaabayaasha Cuntada ayaa si gaar ah loogu arkaa inay yihiin asal ahaan hagitaan cusub oo federaal ah
Coronavirus waxay si aad ah u kordhisay baahida macaamiisha Mareykanka ee noocyo badan oo nafaqada ah, ha ahaato nafaqeynta la hagaajiyay inta lagu jiro dhibaatada, ka caawinta hurdada iyo yareynta culeyska fekerka, ama taageerida howl difaac xoog leh si loo hagaajiyo iska caabinta guud ee halista caafimaadka.
Qaar badan oo ka mid ah soosaarayaasha kaabayaasha cuntada ayaa la nasiyey Sabtidii ka dib markii Hay'adda Nabadgelyada iyo Kaabayaasha Kaabayaasha (CISA) ee ka tirsan Waaxda Amniga Gudaha ay soo saartay hagitaan cusub oo gaar ah oo ku saabsan shaqaalaha kaabayaasha muhiimka ah ee muhiimka ah ee la xiriira COVID-19, ama dillaaca coronavirus.
Nooca 2.0 waxaa la soo saaray dhammaadka usbuuca waxaana si gaar ah loo xardhay soo saarayaasha dheellitirka cuntada-iyo in badan oo warshado kale ah - kuwaas oo shaqaalahooda iyo hawlgalladooda loo tixgelin karo in laga dhaafo joogitaanka guriga ama amarrada hoyga-ku-yaal ee qaadaya gobollo badan.
Tilmaamidii hore ee CISA waxay si ballaadhan u ilaalisay inbadan oo ka mid ah warshadahaas hoostooda cunno xumo ama qeybaha laxiriira caafimaadka, sidaa darteed qeexida lagu daray waxaa lagu soo dhoweeyay shirkadaha ka shaqeeya warshadaha la magacaabay.
"Inta badan shirkadahayada xubnaha ka ah waxay doonayeen inay furnaadaan, waxayna furnaanayeen iyadoo loo maleynayo inay qeyb ka yihiin waaxda cuntada ama qeybta daryeelka caafimaadka," ayuu yiri Steve Mister, madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee Golaha Nafaqada Mas'uulka ah (CRN) ), wareysi. “Waxa ay tani sameyso waa ay cadeynaysaa. Markaa haddii qof ka socda sharci fulinta gobolka uu yimaado oo weydiiyo, 'Maxaad u furan tahay?' waxay si toos ah u tilmaami karaan hagida CISA. ”
Mister ayaa intaas ku daray, “Markii wareegii koowaad ee qoraalkani soo baxay, waxaan aad ugu kalsoonaynay in nalagu dari doono tixraac… laakiin si cad umaysan dhihin nafaqada nafaqada leh. Waa inaad aqriso inta udhaxeysa khadadka si aad noogu aqriso. ”
Tilmaamaha dib loo eegay waxay ku kordhinayaan faahfaahin muhiim ah liiska shaqaalaha aasaasiga u ah kaabayaasha dhaqaalaha, waxayna si gaar ah ugu darayaan daryeelka caafimaadka, sharci fulinta, gaadiidka iyo warshadaha cuntada iyo beeraha.
Kuwa sameeya nafaqada dheeraadka ah ee cuntada ayaa si gaar ah loogu xusay macnaha guud ee daryeelka caafimaadka ama shirkadaha caafimaadka bulshada, waxaana lagu taxay warshado kale sida bayoolajiyada, qeybiyeyaasha qalabka caafimaadka, qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, dawooyinka, talaalka, xitaa waxyaabaha nudaha iyo waraaqaha.
Warshadaha kale ee dhowrista leh ee magacaaban waxay udhaxeeyeen raashinka iyo shaqaalaha farmashiyaha, soosaarayaasha cuntada iyo alaab-qeybiyeyaasha, baaritaanka xoolaha iyo cuntada, shaqaalaha nadaafadda iyo cayayaanka.
Warqadda hagista waxay si gaar ah u xustay talooyinkeeda ugu dambayntii waa la-talin dabiici ah, liiskana looma tixgelin karo inuu yahay amarka federaalka. Awoodda shaqsiyadeed waxay ku dari kartaa ama yareyn kartaa qaybaha xoogga shaqaalaha iyadoo lagu saleynayo baahiyahooda iyo ikhtiyaarradooda.
"Hay'adda AHPA waxay qaddarinaysaa in shaqaalaha kaabista cuntada ay hadda si gaar ah loogu aqoonsaday inay yihiin 'kaabayaal muhiim ah oo muhiim ah' tilmaamahan ugu dambeeyay ee laga helay Waaxda Amniga Gudaha," ayuu yiri Michael McGuffin, oo ah madaxweynaha Ururka Wax soo saarka Dhirta ee Mareykanka (AHPA), ayaa lagu yiri isagoo saxaafadda la hadlaya. sii daayo "Si kastaba ha noqotee… shirkadaha iyo shaqaaluhu waa inay hubiyaan talooyinka iyo tilmaamaha gobolka iyo kuwa maxalliga ah ee go'aaminta xaaladda ee howlaha u qalma kaabayaasha muhiimka ah ee muhiimka ah."